पढेर विचलित हुनुभयो ? तपाईंभित्र अझै पनि मानवीयताका अवशेष बाँकी छ ! | Ratopati
personज्ञानमित्र exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ६, २०७६ chat_bubble_outline0
मानवीयताका यी अवशेषले तपाईँलाई यस दुनियामा सफलता दिने छैन । न पद, न गरिमा, न धनसम्पत्ति र न त मानवीयताको यस अदृश्य भावले तपाईँलाई घर–परिवार इष्ट–मित्र माझ बुदिमान भनी यश प्रदान गराउँछ । संभावना त झन यसको उल्टो हुनसक्छ...